Fanehoana hevitra | Pakysse
Posts Tagged ‘Fanehoana hevitra’
Sempotra ny MAPAR-an’ilay mpikiky kapila manjelatra
février 6, 2014 in 2014, Andry Rajoelina, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fangalarana ny volam-panjakana, Fisainana mampahonena, Fitantanana mampiomehy, Fomba Fisainana Mivelatra, internet, Madagasikara, Malagasy, MAPAR, Mpanao politika, Politika, Revolution web2.0, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet, Vahoaka misy saina ny malagasy, Web 2.0
Étiquettes : 2014, Andry Rajoelina, Demokrasia, Fanehoana hevitra, Madagasikara, MAPAR, Politikan'ny mpamadika palitao
Iza moa izy ireo?
Mpanakanto, politisianina henjana amin’ny famadihana palitao, mpanao afera. Raha izay fotsiny no jerena dia hita soritra fa tsy misy, na ny iray aza olona matihanina amin’ny fanaovana politika ny ao anatin’ity antoko na fikambanana ity.
Miaraka amin’i Prezida Rajoelina ny fanalavana ny atao hoe « MAPAR ». Ity voalaza anarana ity moa dia tsiahivina fa ilay rangahy kely, be ambo, matim-boninahitra, tia mikarakara lanonana fa indrindra nalaza tamin’ny fikikisana kapila manjelatra ary tompondaka eran-tany amin’ny rediredy. Tsy azo adinoina ihany koa nefa, fa i Dijaka no lehiben’ny fandrobana sy namporisika, nanao sorona ireo olona maty, voatifitra ny 07 febroary 2009 teny Ambohitsirohitra. Ary farany, tamin’ny alalan’ny basy sy ny tafondro tamin’ny 17 marsa 2009 no nangalany ny fitondram-panjakana. Izay nahatonga ny fampianarana manarapenitra, ny filoloavana ny ratsy ambony loha, ho an’ireo miray Tanindrazana.
Inona ny tanjon’izy ireo?
Raha ny fahitana ny fihetsika sy ny fomba fanehoana hevitra ataon’ireto olona miaraka amin’i Rajoelina ireto dia tsotra. Tsy tia filaminana ary olona tia setrasetra sy tia miantsy ady. Mampalahelo ny zava-misy ankehitriny satria, olona tsy matahotra ny tody sy kely saina no milaza ho azy fa hitondra ny fiovana eto Madagasikara.
Raha ny fomba amam-panaon’ireto olona mpikambana ao anatin’ity fikambanana ity mankony, dia ny omaly tsy niova ihany. Izany hoe: » fametrahana ny lainga tsara lahatra ho laharam-pahamehana, ny fanohizana ny fangalarana ny harem-pirenena avo lenta sy ny fampiasana ny fahefana ho an’ny tombotsoa manokana ary ny fanaovana tsindry azo lena ireo tsy mitovy hevitra. »
Rajaonarimampianina no tompon’ny fahefana?
Raha ny fahitana ny toe-draharaha misy ankehitriny dia miroana tanteraka any amin’ny firaisankinam-pirenena ilay governemanta vaovao, izay hitsangana tsy ho ela. Indrisy mantsy ry mpamaky sy mpanaraka ity blog ity, tsy henatra sy tahotra ho an’ireto ekipan’i Dijaka ireto ny milaza fa tsy mety aminy hono izany.
Raha i Hery Rajaonarimampianina no filoha voafidy dia azo lazaina izany fa izy no tena tompon’ny fahefana farany. Enga anie, ka ho zoky lahy tsy Vomanga ny anao lahy. Aoka ihany koa, ny tantara no hitsara fa raha ny fisainan’ireto olon’i Rajoelina ireto no arahana dia ny tsy hivoahan’i Madagasikara anaty lavaka ihany no mety amin’izy ireo.